တတိယအကြိမ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် ပထမပုံမှန်အစည်းအဝေးကျင်းပရန် ခေါ်ယူခြင်း
Ministry of Information / Posted on January 06, 2021
ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ရုံးဝန်ကြီးဌာနသည် ရပ်ကွက် သို့မဟုတ် ကျေးရွာအုပ်စု အုပ်ချုပ်ရေး ဥပဒေ ပုဒ်မ ၃၆ ပုဒ်မခွဲ (က) အရ အပ်နှင်းထားသော လုပ်ပိုင်ခွင့်ကို ကျင့်သုံး၍ ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့၏ သဘောတူညီချက်ဖြင့် အောက်ပါ နည်းဥပဒေများကို ထုတ်ပြန်လိုက်သည်-
အခွန်အယူခံခုံအဖွဲ့ရုံးက ( ၁၅ - ၁ - ၂၀၂၁ ) ရက်နေ့ ၊ နံနက် (၁၀)နာရီ အချိန်တွင် ဗီဒီယိုဆက်သွယ်မှုစနစ်ဖြင့် ကြားနာရန်ချိန်းဆိုထားသောအမှုစာရင်း
Revenue Appellate Tribunal / Posted on January 06, 2021
အခွန်အယူခံခုံအဖွဲ့ရုံးက ( ၁၄ - ၁ - ၂၀၂၁ ) ရက်နေ့ ၊ နံနက် (၁၀)နာရီ အချိန်တွင် ဗီဒီယိုဆက်သွယ်မှုစနစ်ဖြင့် ကြားနာရန်ချိန်းဆိုထားသောအမှုစာရင်း
Naypyitaw Development Committee / Posted on January 06, 2021
တင်ဒါအောင်မြင်သောကုမ္ပဏီများ အမည်စာရင်းအား Website တွင်ကြေညာခွင့်ပြုပါရန်ကိစ္စ
Ministry of Transport and Communications / Posted on January 05, 2021
ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံး အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၂ / ၂၀၂၁ ၁၃၈၂ ခုနှစ် ၊ နတ်တော်လပြည့်ကျော် ၆ ရက် ( ၂၀၂၁ ခုနှစ် ၊ ဇန်နဝါရီလ ၄ ရက် )
Ministry of Information / Posted on January 04, 2021
ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံး အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၂ / ၂၀၂၁ ၁၃၈၂ ခုနှစ် ၊ နတ်တော်လပြည့်ကျော် ၆ ရက် ( ၂၀၂၁ ခုနှစ် ၊ ဇန်နဝါရီလ ၄ ရက် )
ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံး အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၁ / ၂၀၂၁ ၁၃၈၂ ခုနှစ် ၊ နတ်တော်လပြည့်ကျော် ၆ ရက် ( ၂၀၂၁ ခုနှစ် ၊ ဇန်နဝါရီလ ၄ ရက် )
Ministry of Information / Posted on December 31, 2020
1. The period for deduction of tax relief according to the Union Taxation Law 2019 for the incomes exempted from the income was announced up to 30 September 2020 at the latest. Due to this announcement, the taxpayers have crowded into branches of Myanma Economic Bank during the COVID-19 outbreak to be able to enjoy the deduction of tax relief in line with the notice ‘Payment to the bank not later than 30-9-2020’ on the tax payment challan form. The Ministry of Planning, Finance and Industry has issued Announcement 4/2020 for the extension of tax payment to 30 December 2020, not to occur crowds at these places.